Anouya nezvikomba pamba murume akayeva | Kwayedza
Anouya nezvikomba pamba murume akayeva
16 Oct, 2021 - 14:10 2021-10-15T17:34:07+00:00 2021-10-16T14:00:37+00:00 0 Views
MURUME wekuCowdray Park, kuBulawayo anoti ave kugara achitya kuisirwa muchetura kana kuuraiwa nemudzimai wake uyo waanoti anomurova pose paanomubvunza kuti anouyirei nezvikomba zvake pamba pavo.
Masala Zikhali ari panguva yakaoma nemudzimai wake wemakore matanhatu nekuda kwekuunza kwaanoita zvikomba zvakasiyana pamba pavo achirara nazvo mune imwe imba yavanogara vose.
Masala paanobvunza mudzimai wake, Sithandekile Lunga, kuti sei achishaya rukudzo naye nekumudzikisira, anobva aita hukasha otanga kumukanda zvibhakera.
Pedzezvo, anonzi anomukiira panze achimuvimbisa kumuisira muchetura kana kumuuraya.
Masala anoti akaudza Lunga kuti abve pamba apa asi ari kuramba achiti haabve kusvika amuuraya kuti iye ozotora imba yacho.
Mushure mekuona kuti atarisana nerufu, Masala akamhanyira kudare reWestern Commonage Civil Court uko kwaari kukumbira gwaro redziviriro kubva kumukadzi wake.
Mumagwaro ake ekudare anoti: “Ndagara muwanano naSithandekile Lunga makore matanhatu. Dambudziko rake nderekuti anoda zvemhirizhonga zvinoita kuti agare achindirova pose patinotadza kuwirirana uye anondituka achivimbisa kundiisira muchetura achiti kana ndafa azotora imba yatiri kugara tose iyo yandakatamburira kuti nditenge.
“Anounza zvikomba zvake kumba kwangu, orara nazvo mune imwe kamuri yemba yangu. Izvi zvave kundidya pfungwa dzangu zvakanyanya. Dzimwe nguva ndikaenda kumba husiku anoramba kundivhurira gonhi nekuti anenge arere nechikomba chake. Naizvozvo ndiri kukumbirawo gwaro redziviriro.”
Mutongi Jeconia Prince Ncube akapa Masala gwaro redziviriro ndokuyambira Lunga kuti asiyane netsika yekutuka, kurova kana kushungurudza murume wake.